Naxdin Shoolaha Hore
Naas -nuujiyaha Baaskiilka
Jooji Naxdinta Absorber
Batariga mootada korontadu ma heli doonaa biyo? Maxaan samaynaa daadadka kadib?
Bilihii la soo dhaafay, waxaa jiray roobab dabeylo oo soo noqnoqday adduunka oo dhan. Qof walba wuxuu la kulmi doonaa roobka mootooyinka korontada. Marar badan, ma jiraan wax dhibaato ah, laakiin saaxiibbada qaarkood ma bilaabi karaan mootooyinka korontada roobka kadib? Haddaba maxaa keenay in mootada korontada ay biyo hesho? Sida loo ...
Shirkadda Gawaarida TVS waxay bilaabi doontaa nooca 2021 ee mootada Apache RR 310 ee Hindiya ..
Shirkadda Gawaarida TVS waxay bilaabi doontaa nooca 2021 ee mootada Apache RR 310 ee Hindiya berri (Ogosto 30). Mootooyinka soo socda ayaa la filayaa inay maraan isbeddello la isku qurxiyo, inay bixiyaan dejinta hakinta oo la beddelay, iyo inay rakibaan ECUs -ka si looga jawaabo ceejinta. Waa inay koronto ka heshaa 3 ...
Nabadgelyada baaskiiladaha iyo mootooyinka waa inay u hoggaansamaan xeerarka waddooyinka ee Lincoln
Booliiska Lincoln waxay xusuusiyaan dadweynaha inay u hoggaansamaan xeerarka waddada markay fuushan yihiin baaskiilada ama mootooyinka agagaarka Lincoln. Warbixintii booliiska ee bishii Luulyo, Taliyaha Bilayska Lincoln Paul Adams wuxuu bixiyay talooyin, oo looga baahan yahay dadka isticmaala baaskiiladaha ama mootooyinka inay raacaan jihada taraafikada oo ay gebi ahaanba istaagaan ...
BMW Motorrad oo ah soo saare baabuur oo Jarmal ah ayaa Hindiya ku soo bandhigay mootada weyn ee C 400 GT
BMW Motorrad oo ah shirkad soo saarta baabuurta Jarmalka ayaa ku soo bandhigtay mootada weyn ee C 400 GT gudaha Hindiya, isaga oo si maldahan u sheegay in dhawaan la bilaabi doono. Marka la eego waxyaabaha muhiimka ah, gaarigu wuxuu leeyahay naqshad xagjir ah, oo lagu qalabeeyay guddi qalab Bluetooth ah iyo laydhka hore ee LED -ka. Waxay awooddeeda ka heshaa 350cc hal-dhululubo dareere-co ...
Waxqabadka saliidda nuugista shoogga
1. Barta barafka ee saliidda nuugista shoogga ee laga isticmaalo Shiinaha waa inaysan ka hoos marin - 40 ℃. Si kale haddii loo dhigo, marka heerkulku hoos u dhaco 0 ℃ ～ - 40 ℃ xilliga jiilaalka, saliiddu waa inaysan lumin dheecaankeeda. Saaxiibbada dalal kala duwan ayaa dooran kara saliid nuugista shoogga kala duwan sida ay t ...
Dayactirka maalinlaha ah iyo taxaddarrada mootada nuugta shoogga hore
Taxaddarrada isticmaalka maalinlaha ah ee nuugi shoogga hore: Nadiifi dhallaanka ku jira qaybta socdaalka Waqtiga daboolka boorka iyo shaabadda saliidda ee nuugista shoogga waa qaybo caag ah, iyo naqshadda dibintu waxay buuxin kartaa shuruudaha boodhka ee maalinlaha ah. Si kastaba ha noqotee, xiriirka muddada-dheer ee walxaha wasakhda ah ayaa wali damayn doona ...
Noocyada nuugista shoogga mootada
Sida aan wada ognahay, nuugista shoogga waa qayb muhiim ah oo ka mid ah mootada. Shaqadeedu waa in la yareeyo oo la yareeyo saamaynta iyo gariirka mootada inta lagu jiro geedi socodka wadista sababtuna tahay waddada aan sinnayn, iyo in la hubiyo habsami u socodka iyo raaxaysiga wadista, taas oo faa'iido u leh hagaajinta ...
Öhlins Racing waxaa loo xushay inuu yahay alaab -siiyaha u nuuga shoogga gaarka ah ee taxanaha NASCAR® Cup “jiilka xiga”
Hendersonville, North Carolina, May 25, 2021 Öhlins Racing waa hoosaad ka tirsan Tenneco (NYSE: TEN) iyo tartamayaasha tiknoolajiyadda hakinta mootooyinka waddooyinka, isu-soo-baxyada, iyo waddooyinka ka baxsan, ayaa loo xushay inay yihiin alaab-qeybiyaha kaliya ee NASCAR® Taxane Cup of absorbers naxdin for ...
Kooxda Hellobike ayaa soo booqatay shirkadeena
Kooxda Hellobike waxay u yimaadeen shirkadeena cilmi baaris. Maareeyahayaga guud Wu Yunfu iyo agaasimaha farsamada Peng Hao ayaa hogaaminayay kooxda cilmibaarista ee Hellobike si ay u arkaan jawiga wax soo saarka iyo habka farsamada. Intii lagu guda jiray booqashada, maareeyaha guud Wu Yunfu ayaa si diiran u helay cilmi baarista t ...
Damping iyo doorka daminta
Damping waxaa loola jeedaa dabeecadda in baaxadda nidaam kasta oo gariirku uu si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacayo saamaynta dibedda ama sababaha asalka u ah nidaamka ee gariirka, iyo sifeynta tirada ee sifahan. Doorka qoynta ayaa inta badan leh shanta dhinac ee soo socda: (1 ...
Sawir kooxeed ee shaqaalaha qaarkood
Maareeyaha guud Wu Yunfu ayaa khudbad soo dhaweyn ah ka jeediyay shirka. Wuxuu soo dhaweyn diiran u sameeyay dhammaan martidii wuxuuna uga mahadceliyay taageeradooda muddada dheer ee horumarinta Lujury, wuxuuna soo bandhigay heerka horumarka hadda jira iyo qorsheynta mustaqbalka Lujury ee com ...
Koritaankaaga - Madasha Tayada Alaab -qeybiyaha Saddexaad
Wu Hongqin Lujury January.17th Si loo beero oo loo sameeyo bulshada mustaqbalka la wadaago, bulshada danaha guud leh astaamaha aqoonsiga istiraatiijiyadeed, aqoonsiga dhaqanka, koritaanka, iyo joogtaynta sare iyo qoto dheer xiriirka iskaashi, Taizhou Lujury Tec ...
Joog Ku Xidh!
Iimayl noo soo dir